Mayelana NATHI - Sichuan Junling Technology Co., Ltd
ISichuan Junling Technology Co, Ltd
Ngaphambi kokwethula inkampani yethu, kufanele ngazise indawo lapho inkampani yethu yasungulwa khona - uChengdu. Njengoba kwaziwa, iChengdu inesizinda sokongiwa kwemvelo esikhulu esidume umhlaba wonke, ucwaningo lwesayensi kanye nesisekelo sokuzalisa - iChengdu Giant Panda Breeding Research Base, esebenza njenge- "Giant Panda Ex-situ Conservation Ecological Demonstration Project" ukuvikela nokuzala imidondoshiya ama-pandas nama-panda abomvu asengozini eChina Izilwane zasendle zidumile emhlabeni wonke. Ngasikhathi sinye, iChengdu futhi idolobha elinakekelayo nelibekezelela izilwane ezijwayelekile.
Siyasikhathalela isilwane sakho Njengoba usikhathalela
Izitolo ezinkulu nezindawo zokudlela azizibandakanyi izilwane ezifuyiwe
E-Chengdu, ungathatha izilwane ezifuywayo ezungeze umgwaqo ngaphandle kokuphuphuthekiswa (kusobala ukuthi, udinga ukuthi udonse intambo futhi ube nesihambahamba). Izindawo zokudlela eziningi eChengdu azikuthandi ukuletha izilwane ezifuywayo, kodwa ziyazamukela izilwane ezifuywayo. Kukhona ngisho nezinye izitolo ezinezihlalo, amapuleti, amachibi amanzi okuphuza, njll ikakhulukazi izilwane ezifuywayo.
Amakati alahlekile nezinja ezilahlekile ngeke zilambe eChengdu
Kunezindawo eziningi zakudala eChengdu, ezenza izinja namakati amaningi alahlekile kulezi zindawo. Kepha ungakhathazeki ngokuthi bazolamba. Abantu abaningi emphakathini bazobondla. Ngenxa yalokhu, lezi cuties ezincane azesabi izihambi futhi zinamathele. Abantu ababalahli. Yize abanye abantu bethi bangcolile futhi baphethe amabhaktheriya, iningi labantu lisakhombisa isimo sokwamukela kubo.
Kunezindlela ezingamakhulu zokuthanda izilwane ezincane eChengdu
Ukunakekelwa kukaChengdu nokubekezelela izilwane ezifuywayo nakho kubonakala kuzo zonke izici. Isibonelo, ezinye izindawo zakhe amapaki ezifuywayo, amakhulu ezibhedlela ezifuywayo, imibukiso yezilwane ezifuywayo, amapaki amaningi ezilwane, izitolo zekhofi lekati ... konke kwenza abantu babe nomuzwa wokuthi ukugcina izilwane ezifuywayo eChengdu kuyinto ejabulisa kakhulu. .
Ngokususelwa kule ndawo namasiko, iSichuan Junling Technology Co, Ltd., inkampani yemikhiqizo yezilwane eseChengdu, vele, izobhekisisa ukunethezeka kwezilwane ezifuywayo kanye nokusebenziseka kwabaninizilwane ekucwaningweni nasekuthuthukisweni komkhiqizo, futhi ilwele ukwenza abanikazi bezilwane ezifuywayo Nezilwane ezifuywayo zibe nendlela yokuphila engcono ndawonye, ​​lokhu futhi kuyinjongo yangempela yenkampani yethu.